မျက်ဖြေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မျက်ဖြေ
Posted by မောင် ပေ on Jun 30, 2011 in Creative Writing, Short Story |3comments
ကျွန်တော် အတွေးလွန်ပြီး တင်မိတင်ရာ ရေးမိရေးရာ ` ကက၊ခခ ´ ပို့ စ်လေး ခဗျာ အားပေးမှု မရှိရှာ ။ မတတ်နိုင်ပါ ။ ကျွန်တော် လည်း သိသလောက် လေး ကို ပြန်လည် ဝေငှ လိုက်ခြင်းသာ ။ ရွာသူ ရွာသား များ အနေဖြင့် ကျွန်တော့် ကို များ တစ်မျိုး ထင်နေကြမည် လား တော့ မသိ ။ သို့ နှင့် ရွာသူ ရွာသား များ ဖတ်စရာ အဖြစ် မောင်ပေ့ တပည့် ကျော် ဆိုးပေ ကို အင်တာဗျူး ကာ ပို့ စ်တစ်ခု အဖြစ် ဖန်တီး တင်ဆက်လိုက်ပါသည် ။ ဖတ်ကြည့် ကြပါဦး ။ ယခု ပို့ စ် ကို တင်နေသည့် အချိန်တွင် ညဉ့်နက်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် ကျန်ရှိ ဇါတ်လမ်း ကို နောက်ရက်များတွင် ဆက်လက် တင်ဆက်ပေးသွားမည် ဟု ပြောရင်း တင်လိုက်ပါပြီ ။ ဖတ်ကြည့်ကြပါဦး ။
ဆိုးပေ အဘ နှင့် အမ ဆုံးတော့ ရွာ ကို စွန့် ခွါ ခဲ့သည် ။ အဘ ထားခဲ့သော လယ် ၃ ဧက ကျန်ခဲ့သော်လည်း အဘနှင့် အမ မရှိတော့သည့် အရပ် တွင်ဆိုးပေ မနေချင်တော့ ။ တစ်ရွာ မပြောင်း သူကောင်း မဖြစ် ထုံး ကို နှလုံး မူကာ မြို့ တော် သို့ လှမ်းလာခဲ့သည် ။ ရွာရှိ အဘ အမွေ လယ်၃ ဧက ရောင်းရငွေ မှာ ၃ သိန်းကျပ် ကို ပိုက်ပြီး ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ် လုပ်စားရန် မြို့ တော် သို့ ရောက်ရှိလာခဲ့သည် ။ ဆိုးပေ တို့ရွာမှ မြို့ တော် သို့ ကား ၂ဆင့် စီးရသည် ။ လမ်းခရီး ကားပေါ်တွင် ဆိုးပေ စဉ်းစားမိသည် မှာ မြို့ တော် ရောက်လျှင် ဘာလုပ်စားမည် နည်း ။ လက်ထဲ ၃ သိန်း ပါလာသည် ။ မြို့ တော် ရှိ ဘုန်းကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း တွင် ဆိုးပေ နှင့် အမျိုးမကင်းသူ ဘကြီးတေ ရှိသည် ။ ကပ္ပိယ လုပ်နေသည် ဟု သိရသည် ။ ဆိုးပေ စိတ်ကူး တွင် ဘကြီး ကပ္ပိယ လုပ်နေသော ကျောင်းတွင် ခိုဝင်မည် ။ ပါလာသော ပိုက်ဆံ ၃ သိန်း ဖြင့် ဆိုလျှင် ကောင်းရောင်း ကောင်းဝယ် အလုပ် တစ်ခုခုတော့ လုပ်ကိုင် စားလို့ ရမှာပါ ဟု ။ သို့ နှင့် မြို့ တော် သို့ ဆိုးပေ ရောက်ရှိသွားသည် ။ ကားဂိတ် က အဆင်း ငွေထည့် ထားသော လွယ်အိတ်ကလေး ပိုက် ကာ ခရီးသွားများ ကုန်တင် ကုန် ချ များ ကို ကြည့်နေမိသည် ။ သူ သွားရမည့် ဘုန်းကြီးကျောင်း လိပ်စာကလေး ကို လက်ထဲတွင် ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ကိုင်ထားရင်း ဆိုးပေ အနား သို့ ဆိုက်ကား သမား တစ်ယောက် ရောက်လာသည် ။ သို့ နှင့် လိပ်စာ စာရွက်ကလေး ကို ပေးပြီး ဆိုက်ကားစီးရင်း ဆိုက်ကားသမား ကို ဆိုးပေ အင်တာဗျူး လာခဲ့သည် ။
` အကို အခုနင်းနေတဲ့ ဆိုက်ကား က ကိုယ်ပိုင်လား ´
` ဟုတ်ပ ဗျာ ။ ပြီးခဲ့တဲ့ သင်္ကြန် တုန်းက ၂ လုံးထီ အချီကြီးလေး ပေါက်လို့ဝယ်နိုင်လိုက်တာ ၊ နို့ဘယ်ကိုယ်ပိုင် ရှိမလဲ ´
` အကို အခု ဆိုက်ကား ၀ယ်တော့ ဘယ်လောက်ကျ သွားလဲ ဗျ ´
` အခုနင်းနေတဲ့ ဆိုက်ကား က ၀ယ်တုန်းက တော်တော် ရွဲ တယ်ဗျ ။ ပြန်ပြင်ယူ ရသေးတယ် ။ အင်း….အပြီးအစီး အခုပုံစံ မျိုးထိ ဆို ၃ သိန်း နီးပါး ကျသွားတာပေါ့ဗျာ ´
` ဗျာ ။ ၃ သိန်း ဟုတ်လား ။ ဆိုက်ကား တစ်စီး ၃ သိန်း တန်လို့ လားဗျာ ´
` ဟ ကိုယ့်လူ ရ ၊ ဒီမြို့ က ဆိုက်ကားဈေးကွက် အကြောင်း မသိသေးဘူးထင်ပ ။ ဆိုက်ကား ချည်း ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း ဆို ၂သိန်းကျော် ရှိတယ် ဟ ။ စည်ပင် လိုင်စင် နဲ့ ဂိတ်ကြေး မှတ်ပုံတင် ရတာ နဲ့ ဆို အဲဒီလောက် တော့ ကျတာပဲ ဟ ဓ
` ထားပါတော့ ဗျာ ။ ဒါနဲ့ခင်ဗျား နင်းတော့ရော ။ တစ်ရက် ကို ၀င်ငွေ ဘယ်လောက် စီသတုန်း ´
` တစ်ရက် ၀င်ငွေရယ်လို့ တော့ ပုံမှန် ပြောလို့ မရပါဘူး မောင်ရာ ၊ ဂိတ်ထိုးထားလို့ လူလေးများ ကျ မယ် ဆိုရင် တော့ ၃ ၊ ၄၊ ၅ ထောင်လောက်တော့ ရတာပေါ့ ။ ဒါပေမယ့် လည်း အခု က ဆိုင်ကယ် တက်ကစီ ခေတ် မလား ။ ဒီတော့ ကိုယ်တို့ တွေ မှာ ဂိတ်မှာတင် မနေနိုင်တော့ဘူး ။ အခု လို ကားဂိတ်လေး ဘာလေး လဲ လမ်းကြုံခေါက်လေး ရှာရသေးတာပေါ့ ´
မြို့ တော် တွင် ဆိုက်ကားနင်းရမည့် အလုပ်မှာလည်း သေချာမှု မရှိဟု ဆိုးပေ စိတ်ထဲ ၀င်သွားသည် ။ ဘကြီး ရှိသည့် ဘုန်းကြီးကျောင်း သို့ အရောက် ဘကြီး က ၀မ်းသာအားရ ကြိုရှာသည် ။ အလည်အပတ် ဘုရားဖူး လာသည် ဟု ထင်နေရှာသည် ။ ဆိုးပေ လည်း အလိုက်သင့်လေး ပြောဆို ကာ ဘကြီး နေရာချပေးသည့် ဇရပ်ပေါ်တွင် ကျောခင်း လိုက်လေသည် ။ အင်း ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံ နဲ့ တော့ ဆိုက်ကားနင်းစားလို့ မဖြစ်သေးပါဘူး လေ ။ တစ်ခြား စဉ်းစားဦးမှ ပါပဲ ။ ကျောင်းက ဘုန်းဘုန်း ကြည့်ရတာတော့ သဘောကောင်းမဲ့ ပုံပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ငါ က ကြီးပွားတိုးတက်ချင်လို့ မြို့ တက် လာတဲ့ ကောင်ဆို တော့ ဒီဘုန်းကြီးကျောင်း မှာ ကပ်နေရတဲ့ ဘ၀ ကို ဘယ်လို ဖြတ်ကျော်ရမှာပါလိမ့် ။ အင်း ………….။
အစ်ကို windtalker ရေဘယ်သူတွေအားမပေးချင်နေ ကျွန်တော်ရွှေဘိုသားလာအားပေးတယ်နော်
အခုပို.စ်ကိုတော.ပိုအားပေးချင်တယ်ဗျာ ဘာ.လို.လည်းဆိုတော.အစ်ကို. တပည်.က ကျွန်တော်နဲ.
ဘ၀တူနေလို.လေ ကျွန်တော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေတာပဲလေ ကပ္ပိယ ပေါ.ဗျာ
အစ်ကို.လူကိုအားပေးချင်တယ်ဗျာ ဘုန်းကြီးကျောင်းကြီးကပ်နေရတဲ.ဘ၀က ဘယ်တော.လွတ်မလဲဆိုတာ
ကြီးကို စိတ်ထဲနှစ်မထားပါနဲ.လို.နော် ရည်မှန်းချက်လေးနဲ.နေပေါ.ဗျာ စိတ်ဓာတ်မကျစေနဲ.
ကျွန်တော်လည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာနေပြီး ကျောင်းတက်နေတာဗျာ။အဝေးသင်မြန်မာစာတက်နေတယ်
သူငယ်ချင်းတွေက ဘုန်းကြီးကျောင်းသားလို.ခေါ်တယ် ဒါရှက်စရာမဟုတ်ဘူးလေဗျာ အခြေနေနဲ.အချိန်ခါ
အရပေါ.ဗျာ ။ကျွန်တော်ဆိုလည်း ဆယ်တန်းထိအစ်ကိုကထားပေးတာ ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်တော.
အစ်ကိုက ရန်ကုန်ကနေ နယ်ပြန်သွားတယ် ကျွန်တော်လည်း ဘာမှနားမလည်ပဲ တစ်ယောက်ထဲ
ယောင်ချာချာနေခဲ.ရတာ အစ်ကိုမပြန်ရင်သူကျောင်းထားပေးမှာလေ ဒါ.မို. GTC တက်မယ်လို.ရည်မှန်း
ထားတာ အခုတော. သူပြန်သွားတော. ကျွန်တော်လည်း အလုပ်လုပ်တယ် အဝေးသင်ပဲတက်နေရတာ
အစ်ကို.တပည်.ကမှ 300000 လက်ထဲပါသေးတယ် ကျွန်တော်.အစ်ကိုထားခဲ.တုန်းက လက်ထဲအလွန်ဆုံး
20000 ပဲ၇ှိမှာပေါ.ဗျာ။အလုပ်ဝင်လုပ်တာလမ်းစရိတ်ပြတ်ရင် ကိုရင်တွေဆီချေးပေါ.ဗျာ လကုန်ပြန်ဆပ်
ပေါ. အားမငယ်ပါစေနဲ. သူများတွေ ဘုရားရိပ်တရားရိပ်ခိုနားချင်လို.မခိုနားနိုင်ပါဘူး။ ကုသိုလ်ယူမလား
ကြိုက်သလောက်ကြိုက်တဲ.အချိန်ယူလို.ရတယ်။စီးပွာရေးတွက် တွက်မလား ထမင်းစရိတ်သက်သာတယ်
နေစရိတ်သက်သာတယ် ရေ မီး အကုန်သက်သာတယ် အလုပ်လုပ်ရင်းပိုက်ဆံစုပေါ.ဗျာ
ကျွန်တော်ဆို အလုပ်မှာ နေ.လည်စာထမင်းမစားဘူး မနက်စာကို အာရုံဆွမ်းအ၀ကြိတ်သွားတာ
ဒီလိုပဲ ရည်မှန်းချက်လေးထားရတာပေါ. ။ကျောင်းပြီးရင် သူများအလုပ်မလုပ်တော.ဘူးကိုယ်ပိုင်လုပ်ဖို.
ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ လုပ်ရင်လည်းအလွန်ဆုံး2နှစ်ပေါ.ဗျာ ။အစ်ကို.တပည်.ကိုအာပေးတာနော်
ကက ခခ တော့ ဖတ်လိုက်တယ်။ ဘာမန်းရမှန်း မသိလို့။